Zanak'Olona - Wikipedia
Ny Zanak'Olona, ao amin'ny jodaisma sy ny kristianisma, dia olona hiseho amin'ny andro farany izay tsy iza fa ny Mesia. Tamin'ny vanim-potoana taorian'ny fahababoana tany Babilona ny Jiosy tao amin'ny firehana apokaliptika no niresaka ny amin'ny Zanak'Olona, ary nipoitra tao amin'ny Filazantsara kristiana izany ka nenti-maniondro an'i Jesoa Kristy amin'ny maha Mesia efa nolazain'ny Testamenta Taloha azy.
Fandikana ny teny grika hoe ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου / ho uios tou anthrôpou izany, ary fandikana koa ny teny arameana hoe בר אנש / bar enash na bar nasha, izay nampiasaina tamin'ny andron'i Jesoa, ka mitovy dika amin'ny hoe "olombelona" na "olona" izany sady asolo ny mpisolo tena tsy voafaritra sy ny mpisolo tena hoe "izaho". Isan'ny nahatonga ny finoana an'i Kristy ho olombelona io fitenenana io.
Ny hoe "zanak'olona", "zanak'i Adama" na "toy ny olona" dia fitenenana ampiasaina ao amin'ny Baiboly hebreo, sy amin'ny lahatsoratra apokaliptika (izay voasoratra nandritra ny vanimpotoana anelanelan'ny nanoratana ny Testamenta roa) ary ao amin'ny Testamenta Vaovao grika. Ny endrika tsy voafaritra ("zanak'i Adama", "zanak'olona" "toy ny olona") ampiasaina ao amin'ny Baiboly hebreo dia teny enti-miantso ny olona miresaka amin'ny tena, na enti-manavaka ny olombelona amin'Andriamanitra sy amin'ny anjely, na manavaka ny firenena vahiny (toa an'i Persia sy i Babilona) – izay matetika aseho ho toy ny biby (bera na orsa, osy, ondrilahy) ao amin'ny lahatsoratra apokaliptika – amin'i Israely izay aseho ho toy ny olombelona ("zanak'olona"), na midika olona andrasana amin'ny andro farany (ny Mesia Mpanjaka jiosy).
Raha miseho amin'ny endrika tsy voafaritra dia hita ao amin'ny Testamenta Taloha grika sy amin'ny boky apokrifan'ny Baiboly ary ao amin'ny boky pseodepigrafa. Ny Testamenta Vaovao grika dia mampiasa ny endrika tsy voafaritra nefa mampiditra ny endrika voafaritra, "ny zanak'olona", izay manondro ny Andriamanitra Mesia, ao amin'ny fahazoan'ny Kristiana ilay fitenenana.
1 Ao amin'ny jodaisma
1.1 Ny hoe "zanak'olona ao amin'ny Baiboly hebreo
1.2 Fanazavan'ny raby Shlomo Itzhaki ny Daniela 7
2 Ao amin'ny kristianisma
Ao amin'ny jodaismaModifier
Ny hoe "zanak'olona ao amin'ny Baiboly hebreoModifier
Ny fitenenana hoe בן–אדם / ben-'adam "zanak'olona" dia miseho in-107 ao amin'ny Baiboly hebreo, ka ny ankamaroany dia hita ao amin'ny Bokin'i Ezekiela. Miseho amin'ny fomba telo io andrian-teny io: hiresahana amin'olona (i Ezekiela); hampifanoherina amin'ny fahambanian-toetry ny olombelona mitaha amin'ny faharetana sy ny fahambonian'ny voninahitr'Andriamanitra izay sy ny anjely (Nomery 23.19; Salamo 6.4); ary ny olon'ny andro farany izay famantarana ny fiafaran'ny tantara sy ny fotoan'ny fitsaran'Andriaanitra (Dan. 7.13-14).
Ao amin'ny Bokin'i Daniela (Dan. 7) no ahitana firesahana ny amin'ny Zanak'olona tranainy indrindra, izay niseho tamin'ny fotoana nanenjehan'i Antiokosy Epifanesy ny Jiosy, taloha kelin'ny fikomian'ny Makabeo (taona 160). Ao amin'ny Bokin'i Ezekiela koa dia niantso ny mpaminany amin'ny hoe "Zanak'olona" Andriamanitra, nefa tsy misy heviny miafina izany.
Ny teny hoe bar nasha, izay midika ara-bakiteny hoe "zanak'olona", dia teny aramena ilazana ny hoe "olona". Araka ny lahatsoratra dia azony tamin'Andriamanitra ny fanapahana mandrakizay amin'ny andro farany ny Voary manontolo, ka hamarana ny fanjakan'ny ratsy fanahy (dia i Antiokosy) sy ny fahavetavetan'ny fandravana (famadihana ny Tempolin'i Jerosalema ho tempolin'i Zeosy Hipsistosy [grika: Ζεύς Ὕψιστος / Zeus Hypsistos "Zeosy Avo Indrindra"]). Ny hoe Bar nasha dia nadika ara-bakiteny ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny teny grika (Septoajinta) hoe υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου / uios tou anthrôpou, "zanaky ny olona". Maro amin'ireo boky apokaliptika jiosy no ahitana ny firesahana ny amin'ny "zanak'olona", indrindra fa ao amin'ny Bokin'i Henoka sy ny Apokalipsin'i Esdrasa, ka efa talohan'i Jesoa Kristy izany.
Izao no voasoatra ao amin'ny Bokin'i Daniela:
Ny toko faha-7 ao amin'ny Bokin'i Daniela dia miresaka ny amin'ny fahitana naseho tamin'i Daniela izay nahitana "bibidia" efatra mampiseho ny firenena jentilisa, izay mangeja ny vahoakan'i Israely mandra-pitsaran'Andriamanitra azy. Ny Daniela 7.13-14 dia mitantara ny fanomezan'ny Fahagola (izany hoe Andriamanitra) fanapahana manerana ny tany ilay "toy ny zanak'olona" (hebreo: כבר אנש / kibar 'anash). Voasoratra amin'ny fiteny arameana ny andalana ao amin'ny Daniela 7.13.
Fanazavan'ny raby Shlomo Itzhaki ny Daniela 7Modifier
Izao no fanazavan'ny raby Shlomo Itzhaki (hebreo: רבי שלמה יצחקי), izay atao hoe Rashi, an'io:
"13 "nisy toy ny zanak'olona avy ": izany dia ny Mesia Mpanjaka -- "ary ... amin'ny Fahagola": Izay mipetraka ho amin'ny fitsarana sy hitsara ny firenena rehetra. -- "nankeo": tonga. 14 " Ary nomena fanapahana ... Izy": Ary nomeny fanapahana ny firenena rehetra io olona io, ampitoviziny amin'ny bibidia ireo firenena ireo, ary i Israely amin'ny olombelona, satria manetry tena sy tsy manan-tsiny izy ireo.-- "tsy ho tapaka": tsy ho foanana.
Ao amin'io toko faha-7 io ihany dia toy izao ny fanazavany azy: "ilay olona tokana" dia manondro "olombelona" tokoa sady midika koa "ny olo-masin'ny Avo Indrindra" (7.18, 21-22) sy "ny vahoakan'ny olo-masin' ny Avo Indrindra" (7.27).
Ny "olo-masina" sy ny "vahoakan'ny olo-masina" dia angamba maneho ny vahoakan'i Israely - manambara ny fanantenany ny mpanoratra fa handray ny fahefana amin'izao tontolo izao Andriamanitra, lavitra ny "firenena" jentilisa izay toy ny bibidia, ary hanome an'izany an'i Israely toy ny olona..
Ny teolojia kristiana dia mandika izany ho sarin'ny Mesia Andriamanitra kristiana ao amin'io andininy io."
Ao amin'ny kristianismaModifier
Mihoatra ny 84 ny andalana ao amin'ny Testamenta Vaovao ahitana an'i Jesosy miantso ny tenany hoa "Zanak'olona" sady maneho ny tenany ho ilay mpitsara amin'ny fotoana farany. Izao ohatra ny voalaza ao amin'ny Evanjelin'i Lioka:
Araka ny Bokin'i Malakia (Mal. 3.1) dia hiseho amin'ny alalan'ny iraka farany ny fiaviana eskatolojikan'Andriamanitra any am-parany. Araka ny Evanjelin'i Matio (Mat. 3.3), ny lovantsofina jiosy dia miandry ny fiverenan'i Elia, ny lovantsofina krostiana kosa mihevitra fa i Joany Mpanao Batisa izany iraka izany). Rehefa niditra tao Jerosalema tamin'ny andron'ny Sampan-kazo (na Sampan-drofia) i Jesosy, ka nitaingina boriky amin'ny maha mpmanjaka azy, ka nanadio ny Tempoly, dia niseho ho Mesia.
Ny Kristina voalohany dia ny "Zanak'Olona" dia i Kristy be voninahitra izay andrasany amin'ny parosia. Ny ohatra mazava tsara momba ny fampiasana ilay andian-teny amin'io heviny io dia hita ao amin'ny Asan'ny Apostoly (Asa. 7.55-56), izay mitantara an'i Stefana (na Etiena) teo anatrehan'ny Sinedriona tamin'ny fotoana hamonoana azy:
Hita ao amin'ny Bokin'ny Apokalipsy izany lohahevitra izany:
Ao amin'ny teolojia kristiana taty aoriana, dia manondro ny maha olombelona an'i Jesoa ny anaram-boninahitra hoe "Zanak'Olona", fa ny hoe "Zanak'Andriamanitra" kosa milaza ny maha Andriamanitra azy. Izany no foto-pampianarana kalkedoniana izay manantitra ny natiora roan'i Kristy (latina: vere Deus, vere Homo "Andriamanitra tokoa, Olona tokoa").
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zanak%27Olona&oldid=974993"
Dernière modification le 23 Septambra 2019, à 12:43
Voaova farany tamin'ny 23 Septambra 2019 amin'ny 12:43 ity pejy ity.